Xuquuqda iyo waajibaadka deganaha - InfoFinland
Nolosha Finland > Deganaanshaha > Xuquuqda iyo waajibaadka deganaha
Gurigayga ma dayactiri karaa? Qof kale guriga ma ka sii kireyn karaa? Maxaan samayn karaa, haddii uu deriskaygu buuqo? Boggan waxaa lagu uruuriyay xuquuqaha iyo waajibaadyada ugu muhiimsan ee deganaha Finland.
Waxaa waajib kugu ah
in aad u hoggaansatid xeerarka nidaamka ee shirkadda gurigaada, haddii aad deggan tahay guri dabaq ah ama guryaha dhinaca isku haaya. Xeerarka nidaamka waxaa ahaan sida caadiga ah ku qoran tusaale waqtiga ay tahay in buuqa la yaraayo. Waxaa sidoo kale inta badan ku jira tilmaamaha sida loo isticmaalayo goobaha dadka ka dhaxeeya uu gurigu leeyahay. Inta badan waxaa xeerarka nidaamka laga helaa guryaha dabaqa ah meesha laga soo galo ee albaabka bannaanka u dhow.
in aad ka taxadirto in xittaa martidaadu ay u hoggaansamaan xeerarka nidaamka.
in aad guriga u isticmaasho oo kaliya wixi loogu talagalay. Haddii guriga loogu talgalay in la dego,meel kale ma degi kartid iyo guriga kama dhigi kartid goob ganacsi.
Waxaad xaq u leedahay
in aad nolol caadi ah ugu noolaato gurigaada. Shirkadda gurigu ma soo saari karto amarro ka soo horjeeda sharciga, ama aad u xadidaya nolosha caadiga ah.
nabadgelyo guri. Deriskaadu tusaale ahaan qeylo badan habeenki saqda dhexe kuma qashqashaadi karaan deganaanshaha guriga. Haddii uu deriskaadu marar badan aad u jebiyo xeerarka nidaamka, marka hore deriskaada kala hadal arrinta. Haddii tani ay waxba caawin weyso, waxaad la xiriir kartaa odayga guriga ama laga kiresytaha. Nabadda guriga waxaa loola jeedaa sidoo kale in aad leedahay go’aanka cidda gurigaada imaan karta.
Xuquuqda iyo waajibaadka kireystaha
Waxaa waajib kaa saaran yahay
in aad kirada waqtigeeda ku bixiso. Caddadka kiradu waxuu ku qoran tahay heshiiska kirada. Laga kireystuhu wuxuu kirada guriga ku qaaliyeen karaa hab waafaqsan waxa lagu heshiiyay ee heshiiska kirada ku qoran.
in aad ka taxadirto in xaaladda gurigu wanaagsanaato.
in aad u hoggaansato shuruudaha heshiiska kirada. Haddii tusaale ahaan xeshiiska kirada lagu mamnuucayo in gudaha sigaar lagu cabo, markaas sigaar kuma cabi kartid gudaha gurigaada. Haddii heshiiska kirada lagu dalbanayo caymiska guriga, waa in aad markaas gashaa ceymiska. Si kastoo ay ahaatee waxaa wanaagsan in la galo ceymiska guriga, xittaa haddii aan lagaa dooneyn.
in aad weydiisato ogolaansho haddii aad dooneyso in aad wax ka bedesho guriga, tusaale ahaan haddii aad derbi rinjiyeynayso. Ogolaanshiyo la’aan waxba kama bedeli kartid guriga, haddii aad xittaa adigu bixineyso kharashka dayactirka. Weydiiso ogolaansho qoraal ah.
in aad u megto laga kireystaha, haddii aad guriga qasaare u geysatay.
in aad ogeysiiso laga kireystaha, haddii aad guriga ku aragto cillado, uu laga kireystaha mas’uul ka yahay. Tusaale ahaan laga kireystuhu wuxuu mas’uul ka yahay qalabka guriga ku dhisan iyo qalabka dhulka.
in aad ogeysiiso shirkadda dayactirka guriga cilladaha imaan kara sida tubo biyo deyneysa oo kale.
in guriga aad kireysatay ku deganaato si waafaqsan heshiiska kirada. Laga kireystuhu wuxuu guriga ku imaan karaa oo kaliiya xaalado gaar ah marka ay dhacaan, tusaale ahaan isagoo ilaalinaya dayactir guriga ka socda ama isagoo soo tusaya qof guriga ka iibsaneysa. Markaas xittaa waa in uu adiga arrinta horay kaagala heshiiyaa.
in aad horay u hesho ogeysiis qoraal ah, haddii ay kiradu kaceyso. Ogeysiiska waa in ay ku qoran tahay waqtiga ay kiradu kaceyso iyo inta ku kordheysa, iyo sababta loo cuskaday kicinta kirada. Si kastaba ha ahaatee haddii heshiiska kirada lagu qoray shuruudaha iyo wakhtiga kicinta ijaarka, laga kireystuhu wuxuu isagoo aan kuu soo dirin wargelin gaar ah kicin karaa kirada isagoo ku salaynaya heshiishka.
waqtiga ka bixista heshiiska kirada ee uu sharcigu dhigayo.
in aad islamarkiiba heshiiska kirada ka baxdo, haddii deganaanshaha gurigu ay halis ku tahay caafimaadka.
in aad qeyb guriga ka mid ah qof kale ka kireysato, haddii aysan dhib ku aheyn laga kireystaha.
in aad horay u hesho ogeysiiska dayactirka guriga. Dayactirka yar waa in lagu soo ogeysiyaa 14 maalmood ka hor kuwa weynna 6 bilood ka hor. Si kastoo ay ahaatee dayactirrada degdegga ah ogeysiis la’aan ayaa la sameyn karaa. Haddii ay adag tahay ama aysan suurtagal aheyn in guriga la deganaado inta dayactirku socdo, waxaad xaq u leedahay in aad ka baxdo heshiiska kirada ama aad hesho qiimo-dhimista kirada. Si kastoo ay ahaatee waa in aad arrintan mar walba kala heshiisaa laga kireystaha.
Ka aqriso wixi dheeri ah bogga InfoFinlandi Heshiiska kirada.
Xuquuqda iyo waajibaadka guryaha la leeyahay
Waxaa waajib kaa saaran yahay shirkadda maamulka guriga
in aad bixiso lacagta magdhowga shirkadda maamulka guriga iyo magdhowga deynta shirkadda maamulka guriga ee laga yaabo in laguugu leeyahay. Lacagahan waxaa lagu maareeya shirkadda maamulka guriga, tusaale ahaan waxaa lagu hagaajiyaa dhismaha iyo bannaanka guriga.
in aad ka taxadirto, in gurigaadu ahaado mid wanaagsan.
in aad horay qoraal ugu ogeysiiso maareeyaha guriga ama guddiga shirkadda maamulka dhismaha, haddii aad guriga ku sameynayso isbeddel saameyn ku yeelan kara dhismaha uu gurigu ku taagan yahay, tubooyinka biyaha, fiilooyinka korontada ama hab-dhiska hawo-beddelka. Tusaale ahaan waa in marwalba horay loo soo sheegaa dayactirka musqusha qubeyska.
in aad dayactirka u sameyso qaab aan dhib ka soo gaareyn dhismaha. Tusaale ahaan dalka Finland waxaa ka jira sharci adag ee quseeyaa sida la doonayo in uu noqdo qoyaan-dhowrka musqusha qubeyska.
in aad ogeysiiso shirkadda maamulka guriga ama maareeyaha guriga ugu horeyn sida caadiga ah shirkadda maamulka guriga, haddii uu gurigu qabo cillad ay tahay in shirkadda maamulka gurigu ay dayactirto.
Shirkadda maamulka guriga waxaad xaq ugu leedahay
in aad maamusho guriga aad saamigiisa leedahay. Waxaad isbeddel ku sameyn kartaa gudaha gurigaada. Ku xisaabtan in dayactirku uusan dhib ku noqon shirkadda maamulka guriga ama saamileyda.
in aad ka kireysto gebi ahaan gurigaada ama qeyb ka mid ah qof kale.
in aad ka qeybgasho shirarka shirkadda oo aad saameyn ku yeelato arrimaha shirkadda guriga. Codkaada ayaad ka dhiiban kartaa arrimaha shirka looga hadlayo waxaadna sidoo kale dalban kartaa in arrimaha qaar looga baaraandego shirka. Shirkadda maamulka gurigu waxey ka shaqeyneysaa in dhismaha daarta, dhowrayaasha, hab-dhiska kululeynta, fiilooyinka korontada, tubooyinka biyaha iyo bullaacadaha iyo weliba agagaarka bannaanka gurigu ay hagaagsanaadaan. Shirarka shirkadda ayaa lagu go’aaminaya dayactirada noocan ah. Shirkadaha guryaha qaarkood waxey go’aansadeen in mas’uuliyadda hab kale loo qeybiyo. Markaas nidaamka shirkadda ayaa waxaa lagu qoray, qolo walba waxa ay qaabilsan tahay.